Bit By Bit - Kubvunza mibvunzo - 3.6 Surveys chokuita mamwe mashoko
Unobatanidza kuongorora zvimwe zvinyorwa date inoita kuti pave kufungidzira chinga hazviiti kudaro.
kuongorora Vazhinji vari kumira-woga, kuzvicheka-ine kuita. Havazivi kuvaka mumwe uye havashandisi zvose nemamwe mashoko huripo munyika. Izvi zvichachinja. Pane zvazonyanya pachaifanira kuburikidza unobatanidza ongororo Data vamwe manyuko data, dzakadai digitaalinen zvisaririra Data muChitsauko 2. Kwaniso iyi kubatanidza kuongorora mamwe mashoko anosimbisa chokwadi chokuti kukumbira uye kucherechedza zviri anotsigira uye kwete Sevamiririri.
Kunyanya, Ndichaenda kusiyanisa mbiri dzakasiyana nzira dzaibatanidza achibvunza uye kucherechedza: yakakura achibvunza uye zvabatsira muchikumbira (Figure 3.10). In Amplified achibvunza kuti digitaalinen zvisaririra havasi upi rakananga kufarira vamwe pane kugona kwavo kubatsira kusvina kukosha kupfuura kubva ongororo mashoko. In zvakapfumisa achibvunza, Ukuwo, vanhu digitaalinen zvisaririra chaizvoizvo ane makirisito chiyero mubereko uye kuongorora mashoko anovaka anodiwa chechinyorwa yakapoteredza.
Akasabvumirana 3.10: Two huru nzira chokubatanidza digitaalinen zvisaririra uye ongororo Data. In yakakura kubvunza (Section 3.6.1) ari digitaalinen zvisaririra zvinoshandiswa kutsigira ongororo Data. In zvakapfumisa kubvunza (Section 3.6.2) ari digitaalinen zvisaririra chaizvoizvo kuva panozogadzirika mwero mubereko uye kuongorora mashoko anovaka anodiwa chechinyorwa yakapoteredza.